Malezia: Vaovao tsara miampy sira kely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 3:51 GMT
Tranonkala maherin'ny 100 no voasakana nanomboka ny volana Janoary 2008 araka ny tatitry ny Serasera Maleziana sy ny Vaomieran'ny Haino Aman-jery Marolafy (MCMC) noho ny votoaty manivaiva fivavahana na manambaka mpanjifa, izay mandika ny fitsipiky ny MCMC.
Na izany aza, voalaza fa nanambara ny Minisitry ny Angovo, ny Rano, ary ny Serasera, Shaziman Abu Mansor fa na dia mahatsapa aza ny governemanta fa ampy ny lalàna misy mba hamehezana ny fitondra-tena tsy mety ataon'ny Maleziana amin'ny aterineto dia ilaina ny fampiharana lalàna haingana. Toa hita fa mikasa ny hametraka fanaraha-maso ny tranonkala, indrindra fa ireo izay malaza amin'ny votoaty mandrisika fikomiana na saropady amin'ny resaka volon-koditra ny komity ahitana ny solontena avy amin'ny MCMC, ny polisy, ny biraon'ny Mpampanoa Lalana Jeneraly ary ny Minisiteran'ny Atitany. Hoy izy,
Any Etazonia, raha misy vohikala mamoaka votoaty azo henjehina, afaka minitra vitsy dia hiditra ny FBI (Birao Federaly ho an'ny Fanadihadiana) ary haka ny fitaovana rehetra mba ahazoana porofo. Miroso mankany amin'io lalana io ihany koa angamba isika,
Araka ny tatitra, nilaza i Shaziman fa nangataka ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana ny kabinetra mba hanafaingana ny fanenjehana an'ireo mpitantana tranonkala, izay manana tranonkala ahitana votoaty voalaza fa mandrisika fikomiana na mandrisika fankahalana ara-pirazanana na manivaiva na inona na inona fivavahana, raha misy porofo ampy hanaovana izany.
Etsy ankilany, tsy mitsahatra ny manampahefana nandray fepetra hanenjehana ireo mpanao gazety an-tserasera. Ohatra, nanaovana be midina imbetsaka nandritra ny folo taona farany ny Malaysiakini, ilay tranonkala mpanangom-baovao tranainy indrindra amin'ny aterineto ao Malezia.
Tsindrio eto raha hijery ny lisitry ny hetsika natao hanenjehana ny fampitam-baovao, tamin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto, tamin'ny taona 2006.